Inty sy Nday: Mbola hanao "oui m'se" ihany ve ?	Mardi, 21 Mai 2013 08:44	Ny naresaka indrindra tamin'iny herinandro lasa iny dia ny fanambaran'ny "mpanelanelana" afrikanina sy ny Vondrona eoraopeanina ny hampiatoan'izy ireo ny famatsiany ny vola hanaovana ny fifidianana nohon’ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny filatsahan-kofidian'ireo kandidà telo, dia Ratsiraka Didier sy Ravalomanana Lalao ary Rajoelina Andry.
Sekolin'ny zandary Ambositra: Mpiofana 470 no nahavita fiofanana	Mardi, 21 Mai 2013 08:44	Mpianatra zandary miisa 470 indray no navoakan'ny sekolin'ny zandarimaria ao Ambositra tamin'ny zoma faha 17 May 2013 lasa teo. Lire la suite...
Pentekôsta 2013: Nahatratra 300 ireo niditra hôpitaly	Mardi, 21 Mai 2013 08:42	Raha nambara talohan'ny fanamarihana ny fetin'ny Pentekôsta fa " hoezahina ny haha-pentekôsta ieren-doza ny amin'ity taona 2013 ity ", dia tsy dia tsinjo loatra izany.
Andry Rajoelina: Hamotika ny tombontsoan’i Frantsa eto ?	Samedi, 18 Mai 2013 07:41	Henjana ny ady hevitra ankehitriny. Mitaky mivantana mihitsy ny hisintahan’i Andry Rajoelina tsy ho isan’ny mpifaninana amin’izao fifidianana filohampirenena izao ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Naneho ny heviny avy arakaraky ny sehatra misy azy izy ireo.